Nitory Tany Amin’ny Tanàna Manodidina ny Reniranon’i Xingu Izy Ireo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Chitonga (Malawi) Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Norvezianina Oromo Ourdou Ouïgour (Sirilika) Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tajiki Tarasque Tiorka Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Vavolombelon’i Jehovah 28 avy any São Félix do Xingu, any Brezila, no nanainga ho any amin’ny tanànan’ny foko indianina cayapo sy yuruna, tamin’ny voalohandohan’ny volana Jolay 2013. Nandeha lakana mirefy 15 metatra izy ireo mba hamakivakiana ny Reniranon’i Xingu. Mikoriana 2 092 kilaometatra mianavaratra izy io ary mihaona amin’ny Reniranon’i Amazone avy eo.
Ny hitory ny Fanjakan’Andriamanitra tany amin’ny tanàna manodidina an’io renirano io no tena anton-dian’ireo Vavolombelona ireo. Tonga tao Kokraimoro izy ireo, telo andro tatỳ aoriana, ary nitsikitsiky sy nandray tsara azy ireo ny olona. Nifanena tamin’ny ramatoa iray nanao fihetsika tamin’ny tanany izy ireo. Nisy vehivavy avy ao an-tanàna nitari-dalana azy ireo, ary nilaza hoe: “Izao no tian’io ramatoa io holazaina: ‘Avia daholo ange ianareo e! Tianay ho fantatra hoe iza moa ianareo!’ ”
Niresaka tamin’ny olona rehetra ny Vavolombelona. Ny sasany tamin’ny teny portogey, moa ny hafa nanao fihetsika tamin’ny tanana sy nanao tenin’ny tanana. Tena nanampy ny sary miloko tao amin’ny boky ara-baiboly nentin’izy ireo. Olona maro no nandray zavatra hovakina, indrindra fa ilay bokikely hoe Mihainoa An’Andriamanitra.
Mpisava lalana manokana, any São Félix do Xingu, i Gerson. Hoy izy rehefa nitantara ny fihetseham-pon’ny lehilahy iray nandray an’ilay boky hoe Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly: “Nojereny aloha ilay boky. Nofihininy mafy ilay izy avy eo, ary tsy navotsony intsony.”
Nahapetraka gazety sy bokikely ary boky 500 teo ho eo tamin’ny olona liana tany ny Vavolombelon’i Jehovah. Nandray tsara koa ny mponina tao Kawatire, ka nihaino ny fampanantenan’ny Baiboly hoe ho lasa paradisa ny tany. Hoy i Tonjaikwa, lehilahy avy amin’ny foko cayapo: “Hoatr’izao fiainantsika izao ihany ny fiainana ao amin’ny Paradisa.”
Mipetraka any São Félix do Xingu i Simone sady anisan’ireo nandeha nitory tany amin’ny tanàna manodidina an’ilay renirano. Niely be tao an-tanànany ilay dia nataon’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nilaza izy fa nanahy ny olona sasany hoe tsy handray tsara azy ireo ny olona any amin’ireny toerana ireny. Tsy nisy anefa ny olana. Hoy i Simone: “Nandray tsara anay ny olona, ary nitorianay daholo ry zareo.”
Nahafoy Tena Izy Ireo: Brezila
Ho hitanao ato ny tantaran’ireo olona nifindra monina mba hanompo an’Andriamanitra bebe kokoa.
MITORY SY MAMPIANATRA